WATERPOINT ens Bixiyeyaasha biyaha • Khamriga cabbitaanka • Is qurxinta • Elkay Polska
Dhadhan - jaban
biyaha guriga iyo xafiiska
Ninku waligiis xiriir ayuu la lahaa biyonoloshu waxay ku urursan tahay ilahaheeda, waaxaha aadanaha ee leh dhammaan qeybaha nolosha. Maanta tijaabooyinka wax soo saarka iyo qeybinta biyaha waxaa weheliya aalado qalafsan iyo geedi socod farsamo.
Shirkadeena, Barta Biyaha wuxuu ka shaqeynayay suuqa ilaa 2004.
Waxaan nahay kali kadhiga hogaamiyaasha adduunka ee warshadaha Poland.
Waxaan hadda iibineynaa alaabada shirkadaha: Acuva - Nalalka UV UV, Is qurxinta - Bixiyeyaasha biyaha, Hagaag - cabbayaasha iyo ilo biyo ah, Birta - dhisme yar, Heesta Qiimaha - hogaamiye dhinaca kormeerka deegaanka, cabirka (tusaale socodka, cadaadiska), duubista xogta iyo nidaaminta shabakada bixinta biyaha (tusaale. alwaaxyada dhimista).
Waxaan sidoo kale kugu casuumeynaa inaad isbarasho u sameyso magacyadeena kale: CityFormDesign.pl iyo ImagiLights.pl
Murerfirma Acuva waxaa la aasaasay 2014. Hadafkeedu waa xalinta dhibaatooyinka jira, ka gudbida caqabadaha iyo wajaha caqabadaha cusub ee bixinta biyo nadiif ah oo la cabbo. Waxay ku takhasustay nidaamyada jeermiska biyaha ee barta isticmaalka, iyo sidoo kale barnaamijyada OEM ee qaabdhismeedka ah. Xilligan, dhammaan nidaamyada Acuva waxaa lagu tijaabiyaa laguna hirgeliyaa ku dhowaad dhammaan qaaradaha adduunka.
Acuva Technologies Inc. waa hogaamiyaha adduunka ee tikniyoolajiyadda UV-LED jeermiska biyaha. Waxay qaabeeyaan, horumariyaan oo soo saaraan nidaamyo UV-LED ah oo casri ah oo jeermiska biyaha lagu nadiifiyo oo casri ah. Ujeeddada shirkaddu waa in ay siiso dadka adduunka oo idil helitaanka biyo nadiif ah oo nadiif ah, sidaas darteedna ay u xaqiijiso nolol tayo sare leh iyaga.
Is qurxinta waxaa la aasaasay 1951 aqoon-isweydaarsi yar oo qoys loogu tala galay samaynta iyo samaynta qaybo warshadaha elektaroniga ah.
Sanadaha soosocda, waxsoosaarka waxaa lagu balaariyay alaabada qaboojiyaha iyaga oo ku saleysan iyaga, waxay bilaabaan wax soo saar Bixiyeyaasha biyaha.
Waqtigaan, waa soo-saare aalado balaaran oo noocaan ah, oo tayo sare leh, xalal farsameed iyo tikniyoolajiyad casri ah iyo muuqaal casri ah, oo laga sameeyay agabka tayada ugu wanaagsan, iyagoo damaanad qaadaya macaamiisha sanado badan oo la adeegsado.
Alaabada is qurxinta waxaa laga iibiyaa dalal badan oo adduunka ah oo lagu qiimeeyaa tayadooda.
Murerfirma Hagaag waxaa la aasaasay 1920 xaafadaha waqooyiga ee Chicago iyada oo ahayd aqoon-isweydaarsi yar.
Tan iyo markaas, wuxuu si joogto ah u shaqeynayay wax soo saar cabbayaasha iyo biyo dhaamissanadihii la soo dhaafay, adoo cadeynaya daryeelkeena tayada ugu sareysa iyo heerarka.
Waa hadda hogaamiyaha adduunka ee suuqan, oo si joogto ah u ballaadhiso dalabkeeda dadka qaata, si joogto ah ugu ballaarinaya moodooyin ku rakiban xalka farsamo ee ugu dambeeyay, sida: adeegga aan lala xiriirin, miiska cagaaran, iwm.
Birta waxay ka kooban tahay qaab waxayna sii wadaysaa inay muujiso hannaanka hal-abuurka ee ku billowday aasaaskeedii 1984.
Maanta waa mid ka mid ah soosaarayaasha ugu waaweyn naqshadaha yaryar ee magaalooyinka adduunka.
Metalco macnaheedu waa Qaabkamaxaa yeelay qaabka ku jira alaabo kasta iyo faahfaahin kasta waxay ka dhigaysaa Metalco mid ka duwan taariikhaheeda naqshadeynta, ee teknoolojiyaddii ugu dambeysay ee cusub. Metalco waa isku dhaf raaxo leh oo loogu talagalay xalka deegaanka.
Guusha ganacsi ee Metalco waa natiijada cilmi baaris joogto ah iyo tijaabooyin u heellan qaabeynta, sidoo kale waxaa mahad leh kaqeyb qaadashada naqshadeeyayaasha caanka ah iyo nashqadeeyayaasha caanka ah ee caalamiga ah, agabyada ceyriinka iyo tikniyoolajiyada cusub ee cusub.
Heesta Qiimaha naqshadaynta iyo waxsoosaarka otomaatig ah habeynta tuubooyinka warshadaha biyaha adduunka.
Laga soo bilaabo 1957, duuliyayaasheena maareynaaya matoorka xakamaynta diaphragm ayaa lagu rakibay qaaradaha adduunka oo dhan.
Haddii ay tahay maaraynta biyo-xireennada Koonfur-bari Aasiya, arrimaha ilaalinta biyaha ee Sacuudi Carabiya, ama baahiyaha qaybinta dowladda hoose ee Mareykanka, waxaan u fidinnaa xalka maareynta biyaha dowladaha, magaalooyinka, ganacsatada iyo qandaraasleyaasha adduunka oo dhan. .
Qaar badan oo ka mid ah alaabaheena hal abuurka ah waxay ka dhasheen rabitaan dabiici ah oo lagu xaliyo dhibaatada dalabka.
Dhibaatada la soo bandhigay, kooxdeenna ku takhasustay qalabka elektaroonigga ah, qalabaynta iyo tuubooyinka xakameyntu waa kuwa aan xasilloonayn cilmi-baaristooda iyo qaabeyntooda illaa inta xal laga helayo.
Eeg animation-ka heestaha >>
Biyo bixiyayaal dhalaalaya ayaa ka soo muuqanaya marar badan shirkadaha, xafiisyada, xafiisyada iyo xitaa guryaha gaarka loo leeyahay. Qalab casri ah oo lagu kaydiyo biyaha ...
Waxaan bixinaa dhalo biyo cabitaan ah oo loogu talagalay waxbarashada, warshadda HoReCa, daryeelka caafimaadka, guriga, xafiisyada, dhismayaasha dadweynaha, jardiinooyinka, xarumaha ...
Bixiye cadaadiska biyaha, sharciyeynta miiraha iyo cabirka cadaadiska. Isbedelada cadaadiska biyaha ee ku dhaca nidaamka biyaha badanaa waa natiijada, kuwa kale, ...
La soco warar dheeraad ah